မိမိသိရှိလိုသော သူ နေထိုင်သည့်နိုင်ငံကြည့်နည်း | MTS Online Radio
အတုမရှိ ဗုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရား →
***** IP Address Finder and Location with Information******
မိမိသိလို သူငယ်ချင်းများနေထိုင်သည့် နိုင်ငံနှင့် ဘယ်နေရာမှ ဘယ်အင်တာနက်လိုင်းကိုအသုံးပြုနေပါသလဲဆိုတာကို အထက်ပါ အကွက်လေးထဲမှာ မိမိသိရှိထားသော IP Address (Internet Protocol address ) ကိုအဲဒီအထဲမှာ Pasteလုပ်ပြီးရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရှာဖွေရန်ပုံစံကိုအထက်မှာပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Click here ကျုနေရာကိုနှိပ်ပီးသွားရောက်ရှာဖွေပါ။ ထို့နောက် Find Location ကို Click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အောက်ပါအတိုင်း မိမိသိရှိလိုသော သတင်းအချက်လက်ကိုတွေ့ ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
IP Address အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကတော
့ IP Address (Internet Protocol address ) isanumerical label assigned to each device (e.g., computer, printer) participating inacomputer network that uses the Internet Protocol for communication. An IP address serves two principal functions: host or network interface identification and location addressing. Its role has been characterized as follows: “A name indicates what we seek. An address indicates where it is. A route indicates how to get there.
One comment on “မိမိသိရှိလိုသော သူ နေထိုင်သည့်နိုင်ငံကြည့်နည်း”
Pingback: တရုတ်၏ ဟက်ကာ တိုက်ခိုက်မှု အား FBI က စုံစမ်းပြီ | Freedom News Group